Revolve ရဲ့ Swinsuit Collection အသစ်နဲ့ တွေ့ရတဲ့ Kylie Jenner နဲ့ Kendall Jenner – FemaleWear.net
Revolve ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ swimwear collection အသစ်ရဲ့ campaign မှာ Kylie Jenner နဲ့ Kendall Jenner တို့ ညီမနှစ်ယောက်လုံးပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၁၀၇ မှာကတည်းက Revolve ရဲ့ပထမဆုံး swimwear collection ကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Kylie နဲ့ Kendall တို့ ညီမနှစ်ယောက်ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြတဲ့ ၂၀၁၈ ရဲ့ Swimwear collection အသစ်ကိုတော့ Revolve ရဲ့ Official website မှာ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး bikini bottoms ကိုတော့ ဒေါ်လာ $58 မှ စတင်ရောင်းချပြီး one-piece အတွက်တော့ £105 ကနေ စတင်ရောင်းချနေပါတယ်။
It’s here and it’s officially swim season ??☀ @kendalljenner in @kendallandkylie classic bikini exclusively on revolve.com – link in bio to shop #revolvexkkswim
၂၀၁၇ ရဲ့ ပထမဆုံး swimwear collection ရဲ့ campaign မှာ ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြတဲ့ အနီရောင် one-piece ကိုတော့ £32 မှ £90 ထိစျေးနှုန်းအသီးသီးသတ်မှတ်ထားပြီး size အရွယ်စားအလိုက် စျေးအမျိုးမျိုးရောင်းချပေးနေပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ rainbow stripe bikini ဒီဇိုင်းအသစ်ကို ထပ်တိုးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
introducing @kendallandkylie SWIM by @kendalljenner + @kyliejenner, exclusively on REVOLVE ? #revolvexkkswim
taste the rainbow ? @kendallandkylie classic bikini + cutout one-piece – link in bio to shop #revolvexkkswim
Tags: Celebrity, swimsuits
သူမရဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Fashion Nova နဲ့ Collaboration လုပ်ခဲ့တဲ့ Cardi B